ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအတွက် ငွေသားလှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ဘဏ်မှာ ငွေစာရင်းဖွင့်ထား | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအတွက် ငွေသားလှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ဘဏ်မှာ ငွေစာရင်းဖွင့်ထား
epa05514148 Myanmar soldiers walks in front ofabillboard of the Union Peace Conference - 21st century Panglong in Naypyitaw, Myanmar, 29 August 2016. According to reports, members of the party joined the workshop to discuss how to avoid delays for the 21st-Century Panglong Peace Conference;afive-day conference planned kicking off on 31 August, where participants will submit their different discussion topics. EPA/HEIN HTET####################HEIN HTET
ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအတွက် ငွေသားလှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ဘဏ်မှာ ငွေစာရင်းဖွင့်ထား
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငွေသား ထည့်ဝင်လှူဒါန်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနကဇန်နဝါရီ၁၀ရက်နေ့ကကြေညာချက်အမှတ်၁/၂၀၁၇နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေပါဝင်မှုရှိစေဖို့မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နေပြည်တော်ဏ်ခွဲငွေစုစာရင်းSF -004048 ကိုထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြဖို့ ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန အနေနဲ့ အခုအခါမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုတွေကို ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ လက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသားနဲ့လှူဒါန်းလိုသူတွေအနေနဲ့အပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေဖို့ မန်မာစီးပွားရေးဘဏ် နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲစာရင်းရှငငွေစာရင်း CF-003434 ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး အဲဒီငွေစာရင်းကို ငွေသားနဲ့ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့ ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Previous articleပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးမြင့်မောင်ကို အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်
Next articleအမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ဦးလွင်ဦးကို အစမ်းခန့်အပ်